Bilingual Bible English / Malagasy: Habakkuk chapter 3 (King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology & Malagasy Bible (1865))
Ny fivavak'i Habakoka mpaminany. Araka ny Sigionota.
Tamy avy any Temana Andriamanitra, Dia ny iray Masina avy any an-tendrombohitra Parana. [Sela] Manarona ny lanitra ny voninahiny, Ary manenika ny tany ny fiderana Azy.
Misy famirapiratana toy ny mazava, Ary misy tàna-masoandro avy eo amin'ny tànany; Ary ao no fieren'ny heriny.
Eo alohany no andehanan'ny areti-mandringana, Ary areti-mandripaka no mivoaka avy eo aoriany.
Nalan-tsarona ny tsipìkanao; Efa nianianana ny fikapohan'ny teny. [Sela] Namakivaky ny tany Hianao mba hisy ony.
Nahita Anao ny tendrombohitra ka toran-kovitra; Mirotsaka ny ranonorana mivatravatra, Mamoa-peo ny lalina Sady manangan-tanana ho amin'ny avo.
Mivoaka hamonjy ny olonao Hianao, dia hamonjy ny voahosotrao; Torotoroinao ny tapenaky ny tranon'ny ratsy fanahy, Ka ahariharinao hatreo an-tenatenany ny fanorenany. [sela]
Nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany Sy hiravoravo amin'Andriamanitry ny famonjena ahy.